Homeလွတ်မြောက်မှုပျောက်ဆုံးသွားသော လွတ်မြောက်မှုအား ရှာဖွေခြင်း
ကျွန်တော်တို့ ကျေးလက်‌‌‌‌‌‌ဒေသတွေမှာက ကိုယ့်ခြံ၊ ကိုယ့်ဝန်းနဲ့ အိမ်ကလေးဆောက်ပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် နေကြတာက များတယ်လေ။ တစ်နေ့ အမေက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ အိမ်ခြံစည်းရိုးထောင့်မှာ အမှိုက်ပစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက ရွာတွေမှာ တကူးတက အမှိုက်ပုံးထားပြီး အမှိုက်ပစ်လေ့ မရှိကြပါဘူး။ သစ်ရွက်ခြောက်တို့၊ ပလပ်စတစ်အိတ်တို့ ထွက်လာရင် မီးပုံမွှေးပြီး မီးရှို့လိုက်ကြတာက များပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ပုံထားတဲ့ အမှိုက်တွေက လေတိုက်ရာ ပါသွားပြီး အိမ်နီးချင်းရဲ့ ခြံစည်းရိုးတစ်ဖက်ကို မတော်တဆ ရောက်သွားတာပါ။ အရင်က အပြန်အလှန် ချစ်ခင်ပြီး အကူအညီပေးကြတဲ့ အိမ်ထောင်စုနှစ်ခုဟာ ဒီလို အသေးအဖွဲကိစ္စလေးကြောင့် အမုန်းပွားပြီး မခေါ်နိုင်၊ မပြောနိုင် ဖြစ်ဖူးတာကို ပြန်တွေးကြည့်ရင် ရှက်စရာကြီးပါပဲ။
အရင်နှစ်တွေတုန်းက ကျွန်တော်တို့ကို အံ့သြဖွယ် ဘဝသင်ခန်းစာတွေ ပေးခဲ့တဲ့ “How to Train Your Dragon” Animation ကားလေးတွေကို ပြန်လည်ခံစား သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်။ ရန်ဘက်တွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ နဂါးနဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခု ပြန်လည်သင့်မြတ်အောင် ကြိုးစားပေးတဲ့ ဇာတ်ကောင်မှာတောင်မှ အဖျက်အဆီး၊ အဟန့်အတားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တာပဲလေ။ Animation ကားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလိုမှာ ကောင်းမှုဆောင်တာကို မလိုချင်တဲ့ ဗီလိန်ကတော့ ပါစမြဲပါပဲ။ ကိုယ့်လမ်း၊ ကိုယ့်ရွာ၊ ကိုယ့်တိုင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက အစချီလို့ ကမ္ဘာကြီးကို သဟဇာတဖြစ်အောင် ဆောင်ကြဉ်းပေးရတဲ့ လူတွေဟာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို မခံရတဲ့လူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါဟာ ဘာလို့လဲ။
လောကကြီးဆိုတာကတော့ အဆိုးတွေနောက်မှာ အကောင်းတွေရှိနေတာ သဘာဝပါပဲ။ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ နေကြတဲ့ လူများသလို၊ မကောင်းတာ လုပ်ရတာကိုမှ ခုံမင်တတ်တဲ့ လူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ လူဆိုးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ဘာသာရေး၊ လူမှုအဆင့်အတန်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေ တစ်ဆင့် အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း မသင့်မြတ်အောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးတော့ ချုပ်ကိုင်ထားရတာကို အလွန်နှစ်ခြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆန့်ကျင်ဖက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းပြီး အောင်မြင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖော်‌ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ယူဆောင်လာဖို့ ဘာကြောင့် ခက်ခဲရတာလဲ။ တကယ်တော့ “လွတ်မြောက်ခြင်း” မရှိလို့ပါ။ ဒီလိုဆိုတော့ လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ အမှန်နဲ့ အမှားကို ပညာရှိရှိ ပိုင်းခြားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ ပညာရေးလွတ်မြောက်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဟန့်အတားတွေကို လွတ်မြောက်မှု၊ အရေးကြီးဆုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြဲမှာလေ့ရှိတဲ့ အကြောက်တရားမှ လွတ်မြောက်မှု စသည်ဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်ကို ကောင်းကျိုးပေးမယ့် စွမ်းအင်မျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွာကလူတွေ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ရင် ဖြန်ဖြေမယ့်လူမရှိဘဲ ပတ်၀န်းကျင်က ဘာကြောင့် တိတ်ဆိတ်နေတတ်လဲဆိုတဲ့ အချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်။ ပြဿနာက လူဆိုးတွေ အများကြီးရှိလို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အကြောင်းရင်းကတော့ လူကောင်းတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ အေးအေးဆေးဆေး၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေချင်ကြပြီးတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုရေးအငြင်းပွားမှုတွေမှာ ဝင်စွက်ဖက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်က အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒီလို စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကို ဘယ်ကနေစ,ပြီး ပြောင်းလဲကြမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ပြင်ဆင်မှုကနေ စ,တင်သင့်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ မတူကွဲပြားမှုနှင့် အငြင်းပွားမှုတွေဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ဖျောက်ဖျက်ပစ်စရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားကြရာမှာ အချင်းချင်း အလေးထားမှု၊ အခြားသူတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို လျော့ပါးမသွားစေရန် ကာကွယ်ပေးမှု၊ ရွာရဲ့ ရှားပါးသယံဇာတတွေကို အလွဲသုံးစား မလုပ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းမှု စတဲ့ အပြုသဘောဆောင်မယ့် ပြောင်းလဲမှုတွေ များပြားလာရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တောထဲမှာ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်လို ပြန်လည်ခံစားရတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။ အခုအချိန်က အမှိုက်ပုံကြောင့် ဘေးအိမ်နဲ့ ရန်ဖြစ်ရမှာ မဟုတ်သလို ပြဿနာတစ်ခုကို ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်း၊ ကူညီပေးမယ့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ သံတမန်တွေအဖြစ် လုပ်ဆောင်ဖို့ရယ်၊ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ကျေးရွာကို ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ယူဆောင်လာဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
Life Balance ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်းပါးများ ပတ်၀န်းကျင် လွတ်မြောက်မှု
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 7, 2022 at 5:47 AM
မတရားမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လူ့လောကကြီးမှာ
မတရားမှုတွေကို မလုပ်ပဲနေရုံနဲ့ မရပါဘူး။
အဲ့ဒီ မတရားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 11, 2022 at 10:21 PM
မတရားမှုတွေကို မဆိုင်သလိုနေကြရင် ခုမအလတွေ ကြီးစိုးလာတာပဲကြည့်...
PaPaWaDe February 26, 2022 at 7:09 AM
ဘယ်လိုပြောမှအသိတရားရပါ့မလည်းနော် လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအားမနာနိုင်ကြပါ အတုအယောင်ကာလမှာပျော်မွေ့နေတဲ့လူအများကိုလည်း တကယ်မုန်းမိပါတယ်
M February 26, 2022 at 6:05 AM
Your future needs you,Your past doesn't.
Thein Soe February 27, 2022 at 9:56 PM
warwar htwe March 4, 2022 at 1:19 AM
နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးအငြင်းပွားမှုတွေမှာ ဝင်စွက်ဖက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဘေးထိုင်နေကြတဲ့သူတွေကသိပ်များလွန်းနေတယ်
PaPaWaDe March 5, 2022 at 6:21 AM
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးခေါင်းရှောင်နေတဲ့လူတွေက ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလည်း? မပြောတော့ပါဘူးဗျာ
Ingyin Phyu Phyu March 8, 2022 at 6:19 PM
စာလေးဖတ်ရင်း click ရတာ ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် ရှင့်။
Unknown March 15, 2022 at 11:42 PM